Ludo King™ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（53.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Ludo King™
* ၎င်းသည်တရားဝင် Ludo King ™ဂိမ်းဖြစ်သည်။
voice chat ရရှိနိုင်
> လူကြိုက်အများဆုံး Ludo ဂိမ်း။ 2016 ခုနှစ်ကတည်းကမိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ပါ0င်သောပထမ ဦး ဆုံး Ludo ဂိမ်း!
Ludo King ™သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအကြားကစားသောဂန္ထဝင်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဖြစ်သည်။ Kings ၏အန်စာတုံးဂိမ်းကိုကစားပါ။ သင့်ကလေးဘဝကိုပြန်သတိရပါ။
Ludo King သည်တစ်ချိန်တည်းတွင် desktop, Android, iOS နှင့် Windows Mobile Platform ကိုထောက်ပံ့သော CrossPlat Platform Publiclayer ဂိမ်းဖြစ်သည်။ Player သည်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဒေသခံ Multiplayer (Pass နှင့် Play Mode) တွင်ကစားနိုင်သည့်အော့ဖ်လိုင်း mode ကိုထောက်ပံ့သည်။ Ludo King သည်ဘောလီးဝုဒ်စူပါစတားများနှင့်အိန္ဒိယခရစ်ကက်ကြယ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းလည်းဖြစ်သည်။ ဒီအန်စာတုံးဂိမ်း Ludo ဘုရင်ကစားပါ။ ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများတွင်အကောင်းဆုံးကျပန်းဂိမ်း။
Disco / Night Mode Theb
Pinball / Night Mode the
> Candy အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ:
အသံချက် Chats Chat Rels: *
New Awesome Live Themes အသစ် !!!
Save / Load Ludo ဂိမ်းရွေးစရာ
အသုံးပြု. FREANK UI
Ludo ဘုရင်သည်ခေတ်သစ် Pachise ၏တော်ဝင်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်ကအိန္ဒိယဘုရင်များနှင့်မိဖုရားများအကြားကစားခဲ့သည့် Ludo ဂိမ်း။ Ludo အန်စာတုံးကိုလှိမ့်ပြီး Ludo ဘုတ်၏ဗဟိုသို့ရောက်ရှိရန်သင်၏တိုကင်ကိုရွှေ့ပါ။ အခြားကစားသမားများကိုရိုက်နှက်ခြင်း, Ludo King သည်။
Ludo King သည်ရိုးရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် Ludo ဂိမ်း၏ကျောင်း၏အဟောင်းကိုကြည့်ရှုသည်။ အိန္ဒိယ၏ရွှေခေတ်ရှိဘုရင်များနှင့်မိဖုရားများကဲ့သို့ပင်သင်၏ကံကြမ္မာသည် Ludo ၏အန်စာတုံး၏လိပ်နှင့်တိုကင်ကိုထိထိရောက်ရောက်ရွေ့လျားခြင်း၏သင်၏မဟာဗျူဟာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Ludo King ၏အင်္ဂါရပ်များ:
* အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာကိုဆန့်ကျင်ကစားပါ။
* သင်၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဒေသခံနှင့်အွန်လိုင်း multiplayer မှတစ်ဆင့်ကစားပါ။
Player Local Multiplayer Mode ကိုဖွင့်ပါ။ Ludo ဘုရင်ဖြစ်လာအောင်သူတို့ကိုရိုက်နှက်ပါ။
သင်၏ Facebook သူငယ်ချင်းများနှင့်သီးသန့်စကားပြောခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
* မတူညီသောဂိမ်းများကိုကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းမျိုးကွဲ7ခုတွင်မြွေနှင့်လှေကားများကစားပါ။
Ludo ဘုရင်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဘုရင်များနှင့်သင်၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများက၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။ သင်ဤ Ludo ကိုနာရီပေါင်းများစွာကစားနေပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်။
Ludo King သည် Ludo ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအချိန် GAME GAME ဖြစ်သည်။ မင်းကမင်းရဲ့ကလေးဘဝမှာမင်းကမင်းငယ်ငယ်လေးကတည်းကကစားခဲ့ဖူးတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအလားတူလွမ်းဆွတ်မှုဂိမ်းတစ်ခုမှာမြွေများနှင့်လှေကားများဖြစ်သည်။ Ludo လိုပဲမင်းငယ်ငယ်တုန်းကဒီဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းကစားခဲ့ဖူးတယ်။ Ludo King သည်ယခုဂန္ထဝင်ဂိမ်းကိုအဆင့်တစ်ခုလုံးအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ သင် 1 ကိုစတင်ရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်ရန်လိုသည်။ သို့သော်သင်တစ် ဦး သေဆုံးသည့်နံပါတ်များကိုသင်လှိမ့်ချိန်တွင်တူညီသောနံပါတ်များကိုသာရွှေ့နိုင်သည်။ လှေကားထစ်၏အစအ ဦး အနေနှင့်သင်တူညီသော tile ကိုဆင်းသက်လျှင်, လှေကားကိုဖြတ်လမ်းအဖြစ်ယူပြီးတက်အပေါ်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ UPS နှင့် Ladders တို့၏ဂိမ်းသည်မျိုးဆက်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်လည်း Ludo ဘုရင်နှင့်လည်းကစားနိုင်သည်။
Ludo သည်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများနှင့် FIA-spel (FIA) ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများ, FIA-spel (FIA), Le Jeu Dada (DADA), FIANA MENDA) ), cờcáers, uckers, bretiariis, chevaux (မြင်းနည်းနည်း), ki nevetn, برسي (Barjis / Barjees), Luodo, Chakka, Lido, Lado, Leedo, Leado, Leado, Leado, Lodo တို့လည်းလူတို့အားလွဲမှားစွာ။
* Facebook: https: //www.facebook ။ com / ludokinggame
* Instps: //www.instagram .com / luro_king_game
ဘာအသစ်လဲ Ludo King™ 6.5.0.203